အယ်လ်နီညို – ပြီးတော့ လာနီညာ – “လာနီညာ” ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်ဦးမှာလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » အယ်လ်နီညို – ပြီးတော့ လာနီညာ – “လာနီညာ” ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်ဦးမှာလဲ
အယ်လ်နီညို – ပြီးတော့ လာနီညာ – “လာနီညာ” ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်ဦးမှာလဲ
Posted by nyanay on Jun 9, 2010 in Other - Non Channelized | 1 comment
အမေရိကန် ရာသီဥတုခန့်မှန်းရေး NOAA ရဲ့ သုတေသနပြုစစ်တမ်းတွေအရ ဒီနှစ် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်ဟာ ၁၉၉၈ ခုနှစ်ကလိုပဲ အယ်နီညိုပြီးတော့ အင်အားပြင်းတဲ့ လာနီညာ ဆက်ဖြစ်လာဦးမလားဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ လာနီညာကြောင့် အခု ဇွန်လကစပြီးသြဂုတ်လအထိ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့ အီကွေတာဒေသ အနောက်ဘက်ခြမ်းက ဒေသတွေမှာ မိုးပိုများမှာကြောင့် ပိုမိုစွတ်စိုတဲ့ရာသီဥတုကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ အိန္ဒိယ၊ အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသတွေမှာ ပုံမှန်ထက်ပိုမို အေးမြတဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဘွယ်ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာထားပါတယ်။
အယ်နီညိုအပြီး-လာနီညာ အစမှာ မိုးများမယ်၊ မိုးများတဲ့အတွက် မြစ်ရေကြီးမယ်၊ ရာသီဥတုအခြေအနေပိုပြီးစွတ်စိုမယ်၊ လာနီညာပြင်းရင်ပြင်းသလို ပိုများမယ် ဆိုတာတွေကို ကြုံတွေ့ရမှာပါ။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မိုးလေဝသတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ လာနီညာကြောင့် ရေကြီးမယ်၊ မြေပြိုမယ်ဆိုတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့် ကြိုတင်ပြီး သတိပေးချက်တွေ ထုတ်ပြန်နေပါပြီ။ REF – Gov’t warns on landslides, floods as La Niña starts
News Quote: By MIKE U. CRISMUNDO June 6, 2010, 3:05pm BUTUAN CITY – The Mines and Geosciences Bureau (MGB) of the Department of Environment and Natural Resources (DENR) and the Office of Civil Defense (OCD) in the Caraga Region on Sunday warned the public on the possible occurrences of landslides due to flashfloods as the La Niña phenomenon starts. In separate statements, the DENR-MGB and OCD directed all local government units (LGUs) to mobilize their respective disaster councils and review their respective mitigating measures to avert loss of lives and damage to infrastructure and agricultural lands.
PAGASA Daily inquirer Alcuin Papa က လာနီညာဆိုတာကို အခုလို မှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။
La Niña is the abnormal cooling of sea surface temperatures that cause heavy rainfall. – သူပြောတာကတော့ လာနီညာဆိုတာဟာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အပူချိန် အလွန်အမင်း ကျဆင်းသွားပြီး အဲသလိုကျဆင်းသွားတာကြောင့် မိုးအရမ်းများလာတယ်” လို့ ဘာသာပြန်ရမှာပါ။
အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာမြောက်ပိုင်းမှာတော့ ၁၉၉၈ ခုနှစ်ကလိုသာ လာနီညာရဲ့ သက်ရောက်မှုရှိလာမယ်ဆိုရင်၊ အဲဒီဒေအတွင်း ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းများဖြစ်ပေါ်မှုဟာ လက်ရှိ မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့မှာ ရေနံများယိုဖိတ်နေတဲ့ ဒေသအပေါ်မှာ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
La Niña episodes also contribute to large-scale temperature departures throughout the world, with most of the affected regions experiencing abnormally cool conditions. Some of the most prominent temperature departures include: 1) below-normal temperatures during December-February over southeastern Africa, Japan, southern Alaska and western/central Canada, and southeastern Brazil; 2) cooler than normal conditions during June-August across India and southeastern Asia, along the west coast of South America, across the Gulf of Guinea region, and across northern South America and portions of central America; and 3) warmer than normal conditions during December-February along the Gulf coast of the United States.
၀န်ခံချက်။ ။from mmweather.com
ဟွန်း … ရာသီဥတုကလည်း ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်တော်တော်များပါလားနော် ။